के साँच्चै एमाले महाधिवेशनबारे बीबीसी, रोयटर्स, अलजजिरा, न्युयोर्क टाइम्सले लेखेका हुन्? भाइरल पोस्टको तथ्य यस्तो – MySansar
अहिले एउटा पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा खुबै भाइरल भइरहेको देखिन्छ। विषय हो- नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन बारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भएको कभरेज। बीबीसी, रोयटर्स, अलजजिरा, न्युयोर्क टाइम्स आदिले महाधिवेशन र ओलीको प्रशंसामा विभिन्न कुराहरु लेखेको दावी गरिएको छ ती भाइरल पोस्टमा। सामान्य कार्यकर्ताहरु मात्रको के कुरा, वागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै यो सेयर गरेका रहेछन्। तपाईँको फेसबुक वालमा पनि पक्कै यो आयो होला। किनभने थुप्रैले यो पोस्ट फेसबुकमा सेयर गरेको देखिन्छ। धेरैले हामीलाई यसबारे फ्याक्ट चेक गर्न आग्रह गर्दै सम्पर्क गर्नुभएको छ। के साँच्चै दावी गरिएको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले लेखेका हुन्? यसबारे हामीले नेपालफ्याक्टचेकमा फ्याक्टचेक गरेका छौँ।
भाइरल भएको पोस्टमा पहिलो दावी बीबीसीको उल्लेख छ। तर हामीले सर्च इन्जिन गुगलमा “१० लाख” र “एमाले” राखी बीबीसी नेपालीमा पछिल्लो एक हप्तामा प्रकाशित सामग्री खोज्दा दावी गरिएको समाचार भेटिएन। गुगलमा सर्च गर्दा कुनै साइट विशेष र समय विशेषको पनि सर्च गर्न मिल्छ। त्यही उपाय अपनाएर हामीले सर्च गरेका हौँ।
2 thoughts on “के साँच्चै एमाले महाधिवेशनबारे बीबीसी, रोयटर्स, अलजजिरा, न्युयोर्क टाइम्सले लेखेका हुन्? भाइरल पोस्टको तथ्य यस्तो”
deshbandhu Khadka says:
साइबर स्याल हरुको बिग्बिगि
dip narayan dahal says:
तपाइँले “तपाईं” नभने पनि म मपाइँ नि हुँ क्यारे ।